Isikhumba se-Itchy nge-pancreatitis - izimbangela, ukwelashwa > Isifo sikashukela
Impilo enesifo sikashukela
Isikhumba esikhanyayo nge-pancreatitis. Izimbangela zokulunywa kwesikhumba nge-pancreatitis. Ukwelashwa kokulunywa kwesikhumba nge-pancreatitis.
Sanibonani kuzo zonke izivakashi kubhulogi le-pancreatitis!
Isihloko sokuthunyelwe kwanamuhla sithi cutaneous ud nge-pancreatitis. Ngabe i-pancreatitis ingadala ukulunywa? Ingabe izidakamizwa ze-enzymatic ze-pancreatitis zingakubangela ukulunywa?
Muva nje, (ngenyanga edlule) ukuthi ngithole kanjani i-itch ku (ngicela uxolo) i-crotch, ebese iqhubekela ezinyaweni zami. Futhi le itch yaziveza ngesimo sokuquleka. Njengoba kuqala ukuklwebheka ngeke ume. Kuhlanganiswe lonke igazi. Uvele ngenkathi ngithatha umkhosi, i-pancreatin ne-creon kuxutshwe, okwangena ngaphansi kwezingalo zami.
Ngiye kudokotela wami futhi ngaxoxa ngezinkinga zami nokuthi kwavela nini ukulunywa. Wabuza ngokuqondile ukuthi ngabe ukulunywa kungenzeka yini ngenxa yamalungiselelo e-enzymatic (i-creon, festal, pancreatin)? Waphendula wathi: - Cha. Le mithi isiza kuphela ukubhala ukugaya. Futhi umbuzo uwukuthi, yini okufanele ngiyenze manje? Waphendula - Yiya ku-gynecologist, ayeke anqume uhlobo lokumiswa kwezitho zangasese. Ngendlela, ushukela wawusejwayelekile, ukuze ungabangeli ukulunywa.
Ngaya kudokotela we-gynecologist, ngathola imvubelo ethile, ngenza isikhathi sokubonisana, selashwa. Futhi itch yayisekhona. Angizange ngizwe nokukhululeka ngesikhathi sokwelashwa. Ngemuva kokunye ukudumazeka nodokotela, waqala ukugoqa ikhanda lakhe futhi ngasikhathi sini ukuqala kokulunywa.
Kwakunempendulo eyodwa kuphela - ngemuva kokuthatha izidakamizwa ze-enzymatic ngokuhlukile. Ngifunde imiyalo ye-creon futhi yabhalwa ngombala omnyama nomhlophe ukuthi i-overdose ingakubangela ukulunywa.
Ngaya ekhemisi, ngathenga umuthi wokukhunta nemvubelo, ovame ukubekelwa emuva kokwelashwa ngamakhambi kanti yikho konke lokho! Impikiswano ngokuqala kwe-pancreatitis ixazululiwe. Kepha ukuthi ihlushwe isikhathi esingakanani, ikakhulukazi uma usikhipha ngegazi. Bengivele nginesikhumba emilenzeni.
Imvamisa, ukulunywa kwesikhumba, umchamo omnyama, ukuqaqamba kwamehlo kuvela lapho kuvela isimila ekhanda lamanyikwe. Ngemuva kokuhlinzwa, ukulunywa kanye nezinye izimpawu zivame ukunyamalala.
Kepha nanti elinye icala. Nasi isimo lapho pancreatitis isikhumba itch kwavela noma okweqisa izidakamizwa ze-enzymatic, noma iqiniso lokuthi yonke into yaphazamiseka ngezikhathi ezithile. Noma mhlawumbe kusuka kumacala womabili ndawonye.
Hawu! Udaba olukhulu luyaxazululwa futhi isiphetho singadonswa ngale ndlela elandelayo - ukulunywa nge-pancreatitis kungavela ezidakamizweni ze-enzymatic uma zingathathwanga kahle. Ngakho-ke, kungcono ukuphuza umuthi ngendlela efanele, njengoba kuchazwe udokotela, njengoba kulindeleke.
Yilokho kuphela. Bengifuna ukuhlanganyela isipiliyoni sami nalesi sihloko. Mhlawumbe othile uzowudinga ukuze bangahlupheki njengami. Inhlanhla kuwo wonke umuntu nempilo enhle.
Ngabe uke walunywa ngenxa pancreatitis? Kukuziphi izindawo futhi wabhekana kanjani nazo? Sicela wabelane, uma kungekho nzima.
Isikhumba esikhanyayo nge-pancreatitis kanye nomdlavuza we-pancreatic
Ukwelashwa kwe-pancreatitis, abafundi bethu basebenzisa ngempumelelo indlela ka-Irina Kravtsova.
Ukulunywa umuzwa ovuthayo nokushayeka ebusweni besikhumba, okwenza umuntu aphazamiseke kakhulu, kuphazamise ikhwalithi yempilo yakhe. Ukulunywa kuholela ekulahlekelweni kokulala nokukhubazeka, ukudangala, izinhloso zokuzibulala. Lesi sibonakaliso siyisibonakaliso esivelele sezifo zesikhumba, kepha sivame ukubonwa nezinye izifo ze-organic.
I-Pruritus iyisibonakaliso esibonakalayo se-pancreatitis engapheli ekhula ngohlobo lwe-pseudotumoral. Uhlobo lwe-pancreatitis enjalo lukhula kancane. Ukuze ama-pancreas e-pathological avele, kudingeka ushintsho olungaphenduki kusuka eminyakeni engu-7 kuye kweli-15. I-pancreatitis yalolu hlobo ibonakala ngokuqubuka kwekhanda le-pancreas, elashwa kuphela ngokuhlinzwa.
Ngefomu le-pseudotumoral le-pancreatitis, i-cholestatic itching ibonwa ezigulini, imbangela yazo ebhekwa njengama-bile acid nezinye izinto ezingaziwa ukuthi zanqwabelana emzimbeni lapho uhlelo lwe-biliary lubuthaka futhi lungacasuli izinzwa ezibucayi zezinzwa ezitholakala esikhunjeni.
Ngemuva kokuhlinzwa, izimpawu zokulimala okungapheli kwamanyikwe anjengomchamo omnyama, kepha izindimbane ezikhanyayo, ukuqonda kwamehlo kwesikhumba, i-sclera yeso kanye nokulunywa kwesikhumba kuyanyamalala.
Isikhumba se-itchy futhi singesinye sezimpawu zomdlavuza owenziwe ekhanda lamanyikwe. Ikhula nge-jaundice ethambisayo, lapho ukuphuma kwe-bile ku-lumen yamathumbu kuthinteke.
Kunezizathu eziningana zalokhu:
ukuhluma kwesimila odongeni lwe-bile duct,
ukuthutha nokuxinana okuvela ngaphandle kwe-bile duct ngobuningi besisu noma ama-lymph node,
umqobo we-lumen we-duodenal papilla onesimila.
Noma yikuphi ukwehluka kokwephulwa kwe-bile okuholela ekuthuthukisweni kwe-meundice subhepatic jaundice. Izakhi zemibhede zingena kwi-lymph, futhi ukusuka lapho ziye egazini. Iqoqo le-bilirubin ngqo elinobuthi emzimbeni likhula ngokushesha. Ukuhlanzeka kuzo zonke izicubu nesikhumba, kuholela ekuthuthukiseni ukulunywa kwesikhumba. Lokhu kuhlanganiswa ukukhuphuka kwamazinga e-histamine egazini.
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, ngomdlavuza we-pancreatic, ukuphazamiseka okulinganiselwe okungaqondile okuqhamuka ebuchosheni kungenzeka.
Ngomdlavuza we-pancreatic, ukulunywa kuthiwa, akunakubekezeleleka, ngaphandle kokushintshashintsha okusobala okuguquguqukayo. Kwesinye isikhathi kuyena obangela ukuhlupheka okukhulu kunazo zonke. Ingavela ngaphambi kwezinye izimpawu ze-jaundice.
Kamuva, umsebenzi wesibindi, kanye nezinye izitho ezithintekile, kuyaphazamiseka. Ukuthuthukiswa kokukhubazeka kwe-renal ne-hepatic kungakhulisa ukulunywa ngenxa yokuqongelelwa kwemikhiqizo ye-metabolic.
Okuningi ngalesi sihloko:
I-pancreatitis ekhanda, izimbangela zayo kanye nokwelashwa.
Izimbangela zokucindezeleka nge-pancreatitis.
Ukwanda kwe-pancreatitis engapheli. Izimbangela zokwenzeka
Ingabe kufanelekile ukugcina i-pancreatitis ngomlomo
Uma ucabanga ukuthi le ndatshana iyathakazelisa ngempela futhi ilusizo, ngizobe ngijabula kakhulu uma wabelana ngalolu lwazi nabangane bakho ezinkundleni zokuxhumana. Ukuze wenze lokhu, mane uchofoze izinkinobho zokuxhumana nomphakathi.
Ngabe kusabonakala kuwe ukuthi ukuphulukisa i-pancreatitis kunzima?
Ukwahlulela ukuthi ufunda le migqa manje, ukunqoba ekulweni ne-pancreatitis akukakabi ngasohlangothini lwakho.
Futhi usuvele wacabanga ngokuhlinzwa? Kuyaqondakala, ngoba ama-pancreas ayisitho esibaluleke kakhulu, futhi ukusebenza kwawo ngendlela eyiyo kuyisihluthulelo sempilo nasenhlalakahleni. Ubuhlungu besisu obujwayelekile, ubuthakathaka, isiyezi, ukuqhakaza, isicanucanu, ukuphazamiseka kwesisu. Zonke lezi zimpawu uyazijwayela.
Kepha kungenzeka ukwelapha imbangela kunomphumela? Sincoma ukufunda indaba ka-Irina Kravtsova. ukuthi wayilahla kanjani i-pancreatitis unomphela.
I-Hubergrits Pancreatology ku “isibuko” (isikhumba sishintsha izifo zezifo zamanyikwe)
Izimpawu ze-pancreatitis. Isikhumba se-Itchy esine-pancreatitis sikhombisa ukuguquka kwesifo kwifomu elingapheli futhi kudinga isimo sengqondo sokwenza inkinga. Okwesibili, ukulunywa kwesikhumba kungenzeka ngenxa yokuthi i-pancreatitis, i-pancreas iyaqhuma, inyuke ngesivinini bese iqala ukucindezela izitho eziseduze. Isikhumba se-itchy esine-pancreatitis sincishiswa kakhulu uma lesi sifo selashwa ngokuphelele.
Ake sizame ukuqonda okungenani lokho kubonakaliswa kwesikhumba okwenzeka ngezifo zamanyikwe. Endabeni yobuhlungu obuphikelelayo obungalapheki ngemithi yomdlavuza we-pancreatic, iziguli kwezinye izimo zisebenzisa ibhodlela lamanzi ashisayo isikhathi eside, okuyi-atypical ngokuphelele i-pancreatitis.
Ama-cutaneous hemorrhages ajwayele ukwenzeka ezinsukwini eziyi-1-2 ngemuva kokuhlaselwa yi-pancreatitis eyingozi, ephelezelwa ama-hemorrhages esifundeni somsila wamanyikwe. Imisebe ye-Liveso ngesimo senethiwekhi enamabala aluhlaza okwesibhakabhaka itholakala esikhunjeni sesisu namathanga aphezulu aphethwe yi-pancreatitis eqinile.
Ngaphezu kwe-pancreatitis eyingozi, kukhona amanye ama-pathologies athinta i-pancreas. Ngakho-ke, ukuqubuka kwesikhumba kungaba uphawu lwe-pancreatitis engapheli. Lapho ukuvuvukala okungapheli kwamanyikwe, kwesinye isikhathi ama-rashes abonwa, okuthiwa uphawu lweTuzhilin. Inqubo yokuvuvukala eyenzeka kumanyikwe, okuholela ekwephuleni imisebenzi yayo, ibizwa nge- pancreatitis.
Ukuvuvukala kwepancreatic kungaba yingozi futhi kungamahlalakhona. Isikhumba se-itchy, njengomthetho, sihlangani se-pancreatitis esingamahlalakhona, esenzeka iminyaka nemashumi eminyaka. Bengingazi nokuthi ukulunywa kungahambisana ne-pancreatitis (Futhi ngiyamangala kakhulu manje (Yize lokhu kunqabile. Nginesifo sokukhanyelwa okungapheli) odokotela bathi ngidla ngokungondleki. Ngivame ukuthi ngibe nenkinga yokungezwani komzimba, ngangicabanga ukuthi ukulunywa nokuqubuka kuyindlela yokusabela, komkhiqizo othile, hhayi lapho engazange ahlobanise i-allergy yakhe ne-pancreatitis.
Sekuyiminyaka eyisithupha ngihlushwa i-pancreatitis, ukuvela komzimba wemithi kuye kwavela futhi kuvame ukuphuma. Ukwelashwa kwe-pancreatitis enzima ophikweni lokunakekela olunzulu. Akujwayelekile ukuthi isiguli sibe nobuhlungu be-paroxysmal, kepha lolu phawu lubonakala kakhulu ezigulini ezine-pancreatitis eyingozi. Izimpawu ze-pancreatitis enzima. I-pancreatitis enkulu ibonakaliswa ukwethuka nokuwa kwesiguli.
Kukhona inani elikhulu kakhulu lezinto ezingavusa ukuvela kwe-pancreatitis:
ukuphuza utshwala kanye ne-nicotine,
ukusetshenziswa kabi kwamafutha, ukubhema, okubabayo, nokudla okuthosiwe,
Izifo zesibindi kanye nepheshana elihlanganisiwe,
ukulimala kumanyikwe, kufaka phakathi i-trauma,
ukusetshenziswa kwezidakamizwa (ama-antibiotics, ama-sulfonamides, ama-cytostatics),
ukutheleleka ngegciwane (i-hepatitis),
Emkhosini obhebhethekako wesifo, kukhona ukwephulwa kwe-excretion ngemithambo yejusi ye-pancreatic. Ama-enzymes wokugaya asebenza ngqo kumanyikwe futhi aqala ukugaya amaseli awo. I-tissue necrosis iyenzeka, kanye nokuqedwa kwesikhashana noma okuphelele kokusebenza kwezingxenye ezithile zesitho.
I-pancreatitis engapheli iba ngemuva kwesimo esibuhlungu salesi sifo, kanye nokuphikisa isizinda sokungasebenzi kwezitho eziseduze zohlelo lokugaya ukudla (isisu, i-duodenum, isibindi). Izicubu ze-pancreatic zonakaliswa, futhi kancane kancane zithathelwa indawo izicubu ezixakile.
I-Cyanosis (umbala we-cyanotic wesikhumba nama-mucous membranes) awenziwa njalo, kepha izinhlobo ezibucayi ze-pancreatitis esibuhlungu futhi ezingalapheki zihlobene. I-acute pancreatitis # 8212, isifo esiyingozi kakhulu, esisuselwa ekugayweni okugcwele noma okuyingxenye (necrosis) yamanyikwe.
Ukushintshwa kwesikhumba, empeleni, kuvame ukubonakaliswa kwezinqubo eziningi ezahlukahlukene zezitho zokugaya emzimbeni, kufaka phakathi namanyikwe. Kepha esikubonayo esikhunjeni kungumphumela wokuphindwaphindwa ukuvela kokuvuvukala, i-dystrophic kanye nolunye ushintsho ezindaweni ezahlukahlukene zomzimba.
Izazi zesibeletho nodokotela bamazinyo kumele bafunde ukuhumusha kahle izinkolelo ezihlanekezelwe “esibukweni esigwegwe”. Kwesinye isikhathi kungenxa yezinguquko zesikhumba ukuthi i-pancreatic pathology enzima efana nomdlavuza noma i-glucagonoma ingasolwa. Izilonda zesikhumba ezifweni zamanyikwe (ngaphandle kwesifo sikashukela i-mellitus # 8212, isifo sikashukela) azikho phakathi kwezikhathi ezejwayelekile.
Isikhumba se-itchy, njengomthetho, sihlangani se-pancreatitis esingamahlalakhona, esenzeka iminyaka nemashumi eminyaka. Nge-pancreatitis, isikhumba esiklashayo sivela ngenxa yezizathu ezimbili ezinkulu. Okokuqala, lokhu kungahle kube ngenxa yokusabela okungahambi kahle emithini esetshenziselwa ukwelapha lesi sifo. Okwesibili, ukulunywa kwesikhumba kungenzeka ngenxa yokuthi i-pancreatitis, i-pancreas iyaqhuma, inyuke ngesivinini bese iqala ukucindezela izitho eziseduze.
Mayelana nalesi simo, isibindi kanye nenyongo kusondele kakhulu, okusho ukuthi bavezwa yile ngcindezi. Ngenxa yalokhu, kukhona ukwephulwa kokuphuma kwe-bile, ukubuyiselwa kwayo egazini. Izakhi ze-bile - bile acid, zingena egazini, zifinyelela emaphethelweni ezinzwa, zibangele ukulunywa kanzima.
Kwi-pancreatitis eyingozi, ukulunywa kwesikhumba akunakwa ngaphandle. Izimpawu eziyinhloko zenkambo yesifo esibuhlungu yizinhlungu ezinzima ku-hypochondrium yangakwesobunxele, kanye nesisu, ukudakwa, isicanucanu, nokuhlanza. Uma ukulunywa kwesikhumba kuhlangana nalezi zibonakaliso zesifo, kungenzeka kakhulu ngenxa yokusabela okungezwani nemithi esetshenziselwa ukwelapha i-pancreatitis eyingozi. Ukulunywa kuvame ukwenziwa jikelele.
Ukuvimbela ukulunywa isikhumba, noma umfutho wawo wehlile, kubalulekile ukuthi uhlolwe esikhungweni sezokwelapha. Udokotela, ngokusekelwe emiphumeleni yezifundo, uzokwazi ukuthola imbangela yokulunywa kwawo futhi anikeze nemithi edingekayo.
Uma ukulunywa kwesikhumba kubangelwa ukungezwani nezidakamizwa, ama-antihistamines azonqunywa. Kusungulwe kahle I-Levocetirizine, i-Desloratadine, i-Fexofenadine, i-Cetirizine. Le mishanguzo ivimba ama-histamine receptors abhekele ukuthuthukiswa kokungezwani komzimba. Ukuqokwa kuzoba kufanele. glucocorticoids, ukunciphisa ukuvuvukala, komzimba, ukunciphisa ukubonakaliswa kwe-pancreatitis.
Kodwa-ke, kuzoba okulungile ukuqeda ubukhona be-bile acid egazini ukugwema ukulungiswa kwesikhumba ngenxa yemiphumela yabo enobuthi ekuphethweni kwezinzwa. Ukulungiselela kwe-Ursodeoxycholic acid kubhekana nalo msebenzi. Bahlangana nama-molecule e-bile acid futhi aba nesandla kokutholwa kwawo.
Isikhumba se-itchy esine-pancreatitis sincishiswa kakhulu uma lesi sifo selashwa ngokuphelele. Ukwelashwa kwe-pancreatitis kufanele kwenziwe ngaphansi kokubhekwa njalo kukadokotela, kungcono ukwenza lokhu ngaphakathi kwezindonga zesikhungo sezokwelapha. Ukwelapha kuyinkimbinkimbi. Inikeza uhla olubanzi lwezidakamizwa, ukwelashwa kwezifo ezihambisanayo zohlelo lokugaya ukudla, kanye nokubambelela ngokuqinile ekudleni okunqunyelwe.
Ukudla okuyenga i-pancreatitis (ukubhema, usawoti, isipayisi, ukudla omuncu, utshwala, ikhofi, iziphuzo ezinekhabhoni) kufanele kuqedwe ngokuphelele. Isikhumba se-Itchy esine-pancreatitis sikhombisa ukuguquka kwesifo kwifomu elingapheli futhi kudinga isimo sengqondo sokwenza inkinga.
I-Acidosis iba negazi kanye ne-hypovolemic shock ngokulahlekelwa ukwazi kanye nokuhluleka kwezitho eziningi. Ekuqaleni kwalesi sifo, iziguli zine-bloating (i-flatulence, izimbangela) kanye nokugcinwa kwesitulo (bheka wonke ama-laxatives okuqunjelwa). Lokhu kungenxa yokuthi ama-enzymes e-pancreatic nama-bile acids, anomphumela we-laxative, ungangeni emathunjini ngenani elifanele.
Ngokubhujiswa okukhulu kanye nokungezwa kokutheleleka nge-purulent, kuvela "ukuguquguquka kwefomula ye-leukocyte kwesobunxele", okungukuthi, ukwanda kwenani lama-leukocytes ahlukanisayo futhi abambe. Ezimweni lapho i-hemorrhagic pancreatitis yenzeka khona ezigabeni zokugcina, i-anemia ingahle ikhule (ukwehla kwezinga lamangqamuzana abomvu egazi kanye ne-hemoglobin). Imvamisa kakhulu inquma izinga le-amylase, likhuphuke ngaphezu kwe-125 U / L emahoreni okuqala esifo ayi-12.I-urine diastasis iqala ukwedlula amayunithi angama-100 ngomkhawulo ophezulu wejwayelekile kumayunithi angama-64. Izidumbu zeshukela ne-ketone nazo ziyavela kumchamo, okubonisa ukwephulwa kwe-carbohydrate kanye ne-protein metabolism.
Ama-pancreas anatomy nesakhiwo
Izimpawu zesifo, ukuxilongwa kanye nokwelashwa kuvame ukuncika esiteji senqubo kanye nasekhaya. Lokhu kubuhlungu, i-dyspepsia kanye nezimpawu zokuhlolwa kwelebhu. Ngesikhathi senqubo, ingxenye efanelekile ye-epigastrium ihlaba ikhanda ekhanda, kanti kwizilonda zomsila, ngakwesobunxele. Uma i-cyst isemzimbeni, izinhlungu zenziwa phakathi maphakathi ne-epigastrium. Izinsizakusebenza zabantu kanye ne-Intanethi ezitholakala zibandakanyeka ekopisheni okungagunyaziwe zizoshushiswa.
Izimpawu "zamaconsi abomvu"
Izinguquko ezibonakala esikhunjeni ngesimo semishanguzo kungaba zimpawu zokuqala zesifo sokuqala kwezitho zokugaya, ezifaka amanyikwe. Ngakho-ke, ungamangali ukuxhumana nodokotela wesikhumba ngesikhalazo sokuqunjelwa udokotela okuthume ukuba ubonane nodokotela osesibelethweni okhombe i-pancreatitis.
Ngokukhuphuka kwesifo, inani lama-rashes lingakhuphuka, ngokufakwa kwenqubo yokuvuvukala kumanyikwe, ukuqunjelwa kunganyamalala. Emkhosini obhebhethekako wesifo, kukhona ukwephulwa kwe-excretion ngemithambo yejusi ye-pancreatic. Ama-enzymes wokugaya asebenza ngqo kumanyikwe futhi aqala ukugaya amaseli awo. I-pancreatitis engapheli iba ngemuva kwesimo esibuhlungu salesi sifo, kanye nokuphikisa isizinda sokungasebenzi kwezitho eziseduze zohlelo lokugaya ukudla (isisu, i-duodenum, isibindi).
Izimpawu zesifo se-pancreatitis kanye nezimpawu zesifo, ezivezwa yizinhlungu zobuhlungu, kepha ngesifo se-pancreatitis esingapheli, izimpawu azivezwa, kepha ngenkambo ende yesifo. Ubuhlungu nge-pancreatitis, ibhande, lisakazeka esifubeni esingezansi. Isisekelo se-pathogenesis ye-pancreatitis ebukhali i-autolysis yamanyikwe nge-enzymes yayo siqu.
Isikhumba se-Itchy nge-pancreatitis # 8211, izimbangela, ukwelashwa
Isihloko sokuthunyelwe kwanamuhla sithi cutaneousud nge-pancreatitis. Ngabe i-pancreatitis ingadala ukulunywa? Ingabe izidakamizwa ze-enzymatic ze-pancreatitis zingakubangela ukulunywa?
Ngaya ekhemisi, ngathenga umuthi wokukhunta nemvubelo, ovame ukubekelwa emuva kokwelashwa ngamakhambi kanti yikho konke lokho! Impikiswano ngokuqala kwe-pancreatitis ixazululiwe. Kepha ukuthi ihlushwe isikhathi esingakanani, ikakhulukazi uma usikhipha ngegazi. Ngivele ngingenaso nesikhumba emilenzeni.
Kungabonakala nini isikhumba esikhanyayo?
Isikhumba se-Itchy esine-pancreatitis kwesinye isikhathi sihambisana nefomu lesifo, eselokhu likhula kancane iminyaka eminingana. Kunezimo ezimbili lapho ukulunywa kungenzeka khona:
Ukungezwani nezidakamizwa kubangelwa izidakamizwa ezithathwa ukwelapha lesi sifo. Emkhakheni wesifo esibi, ukubonakala kokulunywa kuyivelakancane kakhulu. Uma ukulunywa kusekhona, khona-ke ukungezwani komzimba kungaba yimbangela. Uma imbangela yokulunywa kungukungezwani, khona-ke kuyohambisana nokudakwa, ukugabha, isicanucanu.
Ngenxa ye-edema, ama-pancreas ayajuluka futhi acindezela ezithweni eziseduze. Isibindi kanye nesinye esiswini kusondele kakhulu entweni ekhanyisiwe, kutholakala kakhulu engcindezelweni.
Ngalesi sizathu, ukuphuma kwe-bile kuyaphazamiseka, futhi kungena egazini. Lapho-ke ama-bile acid afinyelela emaphethelweni ezinzwa futhi uzizwa ulunge kakhulu.
Indlela yokuqeda ukulunywa
Ukuqeda ukulunywa noma ukunciphisa, kufanele uthintane nodokotela. Umtholampilo uzokwenza zonke izivivinyo ezidingekayo bese uthola imbangela yokulimala. Ngemuva kwalokho, uzokwazi ukunikeza imishanguzo oyidingayo.
Uma imbangela ingukungezwani emithini, khona-ke kufanele unqume ama-antihistamines ukuqeda ukungezwani komzimba. Izidakamizwa ezinjalo zilinganisela i-histamine receptors futhi zivimbele ama-allergies.
Kwesinye isigameko, uzonikezwa ezinye izidakamizwa ezizokubangela ukuthi ungabi nemiphumela engemihle. Ungase futhi unikezwe i-glucocorticoids, ekhulula ukungezwani komzimba futhi inciphise nezimpawu ze-pancreatitis.
Endabeni yokuvuvukala kwe-pancreatic, ama-ursodeoxycholic acid acindezelwa. Ngosizo lwabo, ama-acid acid ayaqedwa, enza ngokungapheli kwezinzwa futhi abangele ukulunywa.
Amathiphu wokwelapha i-pancreatitis
Ukwelashwa kwesifo esinjenge-pancreatitis kwenziwa kangcono ngaphansi kokuqashwa njalo kukadokotela lapho esesibhedlela. Inkambo yesifo kanye nokulunywa kwesikhumba kuzoba lula kakhulu, futhi ukwelashwa kuzoba ngcono kakhulu, ngoba bayobheka ngokucophelela ushintsho emzimbeni wakho.
Kuzoba lula ngawe ukuthi ulandele indlela yokudla; ​​okudlayo kuzoqashwa ngokuqinile. Ngokudla, leyo mikhiqizo evusa i-pancreatitis ayihlanganisiwe.
Uhlu lwemikhiqizo enjalo lufaka:
Nakisisa uhlu lwemikhiqizo! Uma ungalandeli indlela yokudla, khona-ke i-pancreatitis yakho kungenzeka ibe ngaphezulu, futhi uzogula isikhathi esingaphezu konyaka. Kungenzeka kakhulu, uma une-itch, khona-ke lesi sifo sesivele saphenduka isimo esingamahlalakhona. Qiniseka ukuthi ulandela ukudla.
Lesi akusona isifo ongeke usinake. Kunabantu abangafuni ukuphathwa futhi bavele baphuze itiye elishisayo, becabanga ukuthi konke kuzodlula. Abanye 'abachitha isikhathi' bangazi.
Uma ungomunye wabo - cabanga futhi. I-pancreatitis, yomzimba kanye nehlala isikhathi eside, yisifo eselapheka.
Ukuqhubeka nokwelashwa ngokunganaki - kuzokhulisa kakhulu lesi sifo. Ngakho-ke, kufanele usebenzise isikhathi nemali ukuze ube nempilo futhi ungabi nokugula okukhulu. Ungakhohlwa ukulandela ukudla futhi ungazifaki. Yiba njalo ngaphansi kokubhekwa udokotela futhi ube ngcono esibhedlela. Ukwelashwa kuhlale kuyinqubo enzima futhi evame ukubiza.
Kungani isikhumba esidlekayo sivele siveza i-pancreatitis?
Ukulunywa komzimba ngokuvuvukala kwamanyikwe kungavela uma isiguli sinesimo esingapheli sesi sifo.
Ukulunywa kumanyikwe yisiguli kungavela emacaleni amabili kuphela.
Izimbangela zemizwa engemnandi zingaba:
Ukuba khona emzimbeni wesiguli kokungezwani kwemithi.
Ukuthuthukiswa kwe-edema ye-pancreatic.
Ukungezwani kwemithi kwenzeka ngenxa yokusetshenziswa kwemithi esetshenziswa ekwelapheni i-pancreatitis, equkethe izinto ezibangela ukubonakala kokungezwani komzimba.
Ukulunywa komzimba nge-pancreatitis ebabazekayo yinto eyejwayelekile kakhulu.
Uma ukulunywa emanyengeni kucasulwa yimithi, khona-ke kungahambisana nokudakwa komzimba, ukubukeka kwenhliziyo kanye nesifiso sokuhlanza.
Ngenxa yokuthuthuka kwe-puffness, i-iron inyuka ngevolumu. Okuholela ekucindezelweni kwezitho eziseduzane ezinjengesibindi nesinye.
I-pancreatic edema icasule ukwephula ukuphuma kwe-bile. Ukwephulwa okunjalo kuholela ekungeneni kwe-bile emgodini wegazi. Njengomphumela wokungena kwe-bile acid egazini, zifinyelela emaphethelweni ezinzwa futhi zivuse ukuvela kokulunywa kanzima.
Imbangela yesibonakaliso esingathandeki kungenzeka ukuthi kukhula i-cholecystitis, ukuqhubekela phambili kwayo ngemuva kwesizinda se-pancreatitis kukhuphuka ngenxa yokuphulwa kokuphuma kwe-bile.
Ukuthola imbangela eqondile yokubonakala kokungakhululeki esikhunjeni, isiguli kufanele sihlolwe umzimba.
Ngesikhathi sokuhlolwa, uzodinga ukuphumelela lonke uhla lokuhlola kubandakanya ukuhlolwa kwegazi, umchamo nezindunduma.
Igazi linikelwa ukukhomba isilinganiso phakathi kwamaseli egazi amhlophe namaseli abomvu egazi.
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, cishe amangqamuzana abomvu egazi angaba yizigidi ezi-5, amapuleti ayizinkulungwane ezingama-300 kanye namaseli amhlophe acishe abe yizigidi ezingama-4-9 egazini lomuntu. Ukwanda kwenani lamaseli amhlophe egazi kukhombisa ukuba khona kwezinqubo zokuvuvukala emzimbeni.
Ukuhlolwa kwegazi kwembula ukuqina kwalo ngenxa yokuphelelwa ngamandla komzimba. Ukuhlaziywa kuveza ukwehla kwenombolo yamangqamuzana egazi abomvu.
Ngaphezu kwalokho, kwenziwa ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical. Lapho kutholakala khona ukugcwala ngokweqile kwe-bilirubin kuyo.
Ngemuva kokwenza izivivinyo zonke eziyinkimbinkimbi, udokotela obonayo ukhetha indlela namaqhinga wezindlela zokwelapha okuhloswe ngazo ukumisa ukungaphatheki kahle okwenzeka esikhunjeni somzimba.
Isimila esibuhlungu singenye yezilonda ezinzima kakhulu zepancreas. Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi ngezimpawu zesifo ukuze ufune usizo ngesikhathi.
Ekuqaleni, umdlavuza awuzivezi. Izimpawu ezingezona ezichazayo ziyavela kancane kancane, zifana nezimpawu ze-gastritis, i-pancreatitis, i-cholecystitis, ngokwesibonelo, izinhlungu engxenyeni yesithathu ephezulu yesisu ne-hypochondrium yangakwesokudla. Zivutha ziye emuva, zikhulise uma zilele ngomhlane.
Bese kuba nezinhlungu ezishiwo esiswini engenhla. Ngaso leso sikhathi, kuvela izimpawu zokucindezela kwezitho eziseduze: i-jaundice, ukulunywa isikhumba, isicanucanu nokuhlanza.
Uma isimila siqhuma i-pancreatic duct, kukhona ukuqunjelwa, isifo sohudo, ukukhishwa kwamafutha ngama-ndun, ukwehla ngokushesha kwesisindo somzimba.
Isiguli sikhononda ngobuthakathaka, ukuntuleka kokudla, impilo engeyinhle, ukudangala.
Izidakamizwa ezivamile ze-pancreatitis azimlethi impumuzo.
Ukuqubuka komzimba nomsila we-gland kuhambisana nobuhlungu obukhulu emuva engezansi noma epigastrium, ukwehla kakhulu kwesisindo somzimba, kanye nokuthuthukiswa kwesifo sikashukela i-mellitus. Ukubonakala kwe-thrombophlebitis efudukayo, ukuvuvukala kwemithambo, kucacile. Kulokhu, izindawo ezibomvu futhi ukuvuvukala kwesikhumba, imithambo ebuhlungu etholakele ivela emaphethelweni aphansi.
Ukuxilongwa kwezigaba zokuqala kunzima, kepha, ngokusebenzisa ubuchwepheshe besimanje (ngokwesibonelo, imaging yama-magnetic resonance), ithuba lokuthola ukwanda kwesimila. Maduze nje lapho odokotela behlinzwa, yilapho amathuba okuba nemiphumela emihle yesifo avela khona.
Ukubonakaliswa kwesikhumba ezifweni zamanyikwe
Odokotela bavame ukubiza isikhumba somuntu isibuko lapho izinqubo ze-pathological (ukuvuvukala, i-dystrophic, ukudakwa, i-allergic nezinye eziningi) ezenzeka ezinhlakeni ezihlukene zomzimba zikhonjiswa.
Izinguquko ezibonakala esikhunjeni ngesimo semishanguzo kungaba zimpawu zokuqala zesifo sokuqala kwezitho zokugaya, ezifaka amanyikwe.
Ngakho-ke, ungamangali ukuxhumana nodokotela wesikhumba ngesikhalazo sokuxhamazela udokotela akuthumele ukuba ubonane nodokotela osebenzisa izisu. bona i-pancreatitis.
I-pancreas yisitho esibalulekile semfihlo emzimbeni womuntu, esendaweni yesibili ngemuva kwesibindi ohlelweni lokugaya ukudla. Ama-enzyme akhiqizwa indlala abamba iqhaza emkhakheni wokugaya ukudla, aphule ukudla kube ama-carbohydrate, amafutha kanye namaprotheni emathunjini.
Futhi ama-hormone akhiqizwa ngumzimba agcina, ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile, ukuqoqwa koshukela egazini.
I-pancreatitis, ebonakala ngokuvuvukala nokuvuvukala kwesitho, iphazamisa imisebenzi eyisisekelo yamanyikwe, ibangele ukungalingani emzimbeni wonke, othinta ngokushesha isimo sesikhumba, esimbozwe ukuqhuma.
Ukugobhoza esikhunjeni nge-pancreatitis
In inqubo engapheli yokuvuvukala yamanyikwe, lapho lesi sifo sivilapha futhi isikhathi eside, ukungapheleli kwe-exocrine kuyabonakala: ukugcinwa kwesiphuzo se-pancreatic enikezwe i-duodenum, evimbela imvelo ye-asidi esiswini futhi ibambe iqhaza kwinqubo yokugaya, iyancishiswa.
Umsebenzi wama-enzyme ku-lumen wamathumbu uyancipha, izakhiwo ze-bactericidal zentambo yamathumbu, ezihanjiswa kusuka kumathumbu amakhulu ziye kwelincane, ziyancipha.
Ngokuphikisana nalesi sizinda, ukukhula ngokweqile kwamagciwane kukhula, kuholele ekuphakameni okuphezulu kwesithiyo samathumbu, okunyusa ngokushesha ingozi yokuthuthuka komzimba nokungezwani kokudla, okuboniswa ngesimo sokuqubuka kwesikhumba se-atopic dermatitis noma i-eczema. Ngakho-ke, ukuqubuka kwesikhumba kungaba uphawu lwe-pancreatitis engapheli.
Izimpawu zamaconsi abomvu
Lapho ukuvuvukala okungapheli kwamanyikwe, kwesinye isikhathi ama-rashes abonwa, okuthiwa uphawu lweTuzhilin. Esikhunjeni sangemuva, esiswini, esifubeni, kuqhamuke ukuvela kwezindawo eziyindilinga zefomu elifanele lombala obomvu. I-rash, okuyi-aneurysm ye-vascular (ehlukile kuma-asterisks ku-cirrhosis), ayinyamalali ngomfutho.
Ngokukhuphuka kwesifo, inani lama-rashes lingakhuphuka, ngokufakwa kwenqubo yokuvuvukala kumanyikwe, ukuqunjelwa kunganyamalala. Ukuqhuma kwamaconsi abomvu kuwuphawu hhayi nje we-pancreatitis engapheli, kodwa futhi nezifo zemithambo yegazi.
Isikhumba liqhuma ngesifo se-pancreatic
Zithi amehlo ayisibuko somphefumulo. Mayelana nesikhumba, singasho ukuthi isibuko sempilo yomzimba.
Uma kunezinkinga ngepheshana lesisu, khona-ke isikhumba asikwazi ukuhlanzeka: amabhulashi, imivimbo, izilonda kuso.
Kuliqiniso, lezi yizimo ezingemnandi, kepha, ngasikhathi sinye, lokhu kuyizimpawu zomzimba ngesidingo sokumsiza anqobe ukugula angakwazi ukubhekana nakho yedwa.
Emizimbeni yethu, ama-pancreas abhekele inqubo yokugaya. Inikeza ama-enzyme nama-hormone, ngaphandle kwalokho inqubo yokugaya ukudla ayinakwenzeka.
Ukugqabhuka esikhunjeni uma kunesifo se-pancreatic kuyizimpawu zokungasebenzi kahle komsebenzi kwalesi sitho (imfihlo efihlwe yiyo kugaya indlala uqobo, njll.).
Thatha izimpawu nezimpawu zokuqubuka kwesikhumba ngezifo zamanyikwe.
Izifo ze-pancreatic kanye nezimpawu zazo
I-pancreatitis eyingozi. Ukuvuvukala kuvame ukwenzeka ngenxa yesifo se-duodenal. Kungabangelwa nawukuphuza ngokweqile. Ngaphansi kwezimbambo ziqala ukulimala kabi kakhulu (ubuhlungu bibhande kungenzeka). Isihlalo asikhululekile futhi sivela njalo, ukuhlanza ngaphandle komqondo wokukhululeka. Uma usizo lwezokwelashwa lunganikezwanga ngesikhathi, i-pancreatitis iba engapheli, ukuqubuka kwesikhumba ngenxa yamafutha necrosis kungavela.
I-pancreatic cyst. Izimpawu ze-jaundice ezivimbayo zivela lapho i-cyst icindezelwa yizitho eziseduze. Phakathi kwazo, isikhumba esikhanyayo nokutholwa komthunzi ophuzi yi-epithelium.
Isifo sikashukela mellitus. I-pancreas iyayeka ukukhiqiza i-insulin eyanele. Isikhumba esomile, kuvela izilonda kuso. Ubuthakathaka, ukuphulukiswa isikhathi eside kwamanxeba. Umuzwa ongapheli wendlala ukuzuza kwesisindo.
Umdlavuza wepancreatic. Isifo okuwo ukwanda kwaso minyaka yonke. Ngeshwa, izimpawu ze-oncology zenzeka sekwephuzile (i-yellowness noma i-pallor enzima yesikhumba, izinhlungu, isicanucanu, ukuhlanza, ukuncipha kwe-hemoglobin, ukwehla kwesisindo okumangazayo).
Izimpawu zomdlavuza we-pancreatic ziyefana nezimpawu ze-pancreatitis.
Izimbambo zibukeka njengamabhamuza. Isikhumba ezindaweni lapho sisebenza khona sesivuthiwe, siyabanda. Endaweni yokuhlanganisa, lapho kuhlangana khona amabhamuthi, kuvele amakhaza.
Uma isifo se-pancreatic sithuthuka, i-foci yezilonda zesikhumba iyakhula.
Iqiniso liwukuthi ngezinqubo ezinde zokuvuvukala ezenziwa kumanyikwe, ijusi le-pancreatic liqala ukuthululwa ngenani elingafanele, futhi ku-duodenum i-acid ephakathi ayithathi hlangothi. Ukugaya ukudla kuya ngokuya kuba nzima. Izimbali ezingaphakathi emzimbeni zilahlekelwa yindawo yokubulala amagciwane.
Ukukhula ngokweqile kwamagciwane kubangela ukuba umgoqo wamathumbu uvunyelwe kakhulu. Amathuba we-microbial noma komzimba wokudla futhi, ngenxa yalokho, ukwanda kwesikhumba (dermatitis) kuyanda.
Odokotela baseYurophu babiza i-atopic dermatitis eczema.
“Amaconsi” ajikelezayo anemibala ebomvu (ama-aneurysms) akhanyayo avela esikhunjeni. Isizathu salokhu kuvame ukuba yi-pancreatitis, esephenduke isifo esingamahlalakhona. Ngokuyisisekelo, imivimbo enjalo ibonwa emhlane, kanye nasesiswini ngesikhathi sokwanda kwesifo. Okungajwayelekile, esifubeni, ezingalweni nasemilenzeni. Amaconsi anjalo awapheleli uma uqhafaza kuwo.
Engxenyeni yesithathu yeziguli ezitholakala i-pancreatitis, isikhumba sine-tint ephuzi. I-enzyme ebhubhisa isibindi ingena egazini. I -ellellessess nayo ingabonakala uma izindunduma ze-bile zicindezelwe. Kwezinye iziguli, isikhumba siba nsundu kakhulu, sinephunga elimnyama. Isikhumba esifubeni noma esiswini siphenduka luhlaza okwesibhakabhaka (cyanosis).
I-pancreatitis, eba ngohlobo lwe-pseudotumoral, inomlingiswa oshaywayo wamanje futhi ingakhula iminyaka engu-15 kuze kube yilapho izinguquko zingaphenduki.
Iziguli ezinalokhu kutholwa zinenkinga yokulimala kwe-cholestatic: iziphetho zezinzwa esikhunjeni ziyacasuka ngenxa yokuqwabelana kwama-bile acid emzimbeni.
I-tumor form in ekhanda le-pancreas, ukwelashwa kwayo kuphela ngokuhlinzwa.
Kumdlavuza we-pancreatic, ukulunywa kubonakala futhi uma isimila sikhula size singene odongeni lwe-bile duct, izindunduma ze-bile zicindezelwa kusukela ngaphandle noma ngama-lymph node uma i-duodenal papilla ivinjiwe. Kuzo zonke lezi zimo, ukuphuma kwe-bile ungene emathunjini kunzima.
Kuvela uJaundice. Izakhi zemibhede zingena kwi-lymph, bese zingena egazini. I-bilirubin iyanda, futhi inobuthi emzimbeni. Izinga le-histamine liyakhuphuka - ukulunywa kwesikhumba kuba yinto yaphakade.
Lapho ukusebenza kwesibindi nezinso kukhubazekile, ukulunywa kuyanda.
I-Pruritus ingenye yezimpawu eziphambili zezifo zesikhumba. Kepha uma isikhumba sikhanda, imbangela yalokhu kungaba yisifo sezitho zangaphakathi.
Ukuxilongwa kweLabhoratri yezifo
Uma kusolwa isifo se-pancreatic, udokotela unquma ukuthi kuhlolwe igazi, ukuhlolwa komchamo. Ukuhlaziywa kwe-Fecal kungadingeka.
Imvamisa, egazini lomuntu ngamunye nge-1 cubic millimeter - amaseli egazi abomvu angama-5,000,000 (amaseli abomvu egazi) amasephalethi angama-300,000, amaseli wegazi amhlophe ayi-4,000 - 9,000.
Uma ukuvuvukala kuqala emzimbeni, inani lamaseli amhlophe egazi liyanda. Izifo ze-pancreas zibanga ukomisa kwegazi, kuholele ekuxineni kwegazi.
Ngasikhathi sinye, ushukela wegazi lesiguli uphakanyisiwe. Ukuhlaziywa kwe-biochemical kwenza ukuthi kunqume izinga lama-enzymes.
Imvamisa, umchamo akufanele ube namaprotheni, amangqamuzana abomvu namhlophe egazi. Kubantu abane-pancreas egulayo, umchamo umanzi, kukhona izinto zegazi, amaprotheni.
Ukuqinisekisa ukutholwa, udokotela unquma i-ultrasound.
Iziphakamiso zendlela yokupheka nokuxova inhlama kumapayi
Yiziphi izibonakaliso ezivame kakhulu ze-pancreatitis? Kungani isikhumba sihlupheka ngesikhathi senqubo yokuvuvukala, kuguquka umbala kanye nemibala yazo? Ukuvuvukala kwamanyikwe yisifo esiyingozi lapho i-necrosis enengxenye noma ephelele yamaseli wesitho kungenzeka khona.
Ukubona i-pancreatitis ezigabeni zokuqala cishe akunakwenzeka. Imvamisa, iziguli ziqala ukusola ukuthi kukhona okungahambi kahle uma isifo sesithinte kakhulu i-gland.
Ezimweni eziningi, sikhuluma ngokuhlaselwa okuqatha, kepha kunethuba lefomu elingamahlalakhona elinesifo esenzeka isikhathi eside sohlelo lokugaya ukudla, i-endocrine noma i-genitourinary system.
Izimbangela eziphambili ze-pancreatitis ziyindlela yokuphila engajwayelekile nesiko lokudla okunempilo. Futhi, isici sofuzo, ukuphazamiseka kokugaya ukudla, ukungasebenzi komzimba kanye nesinye, kanye nezinkinga ngokususwa kwe-bile kungaholela esifweni se-pancreatic.
Isikhumba ngaphandle kwesizathu kuthiwa yisikhombi sempilo. Noma imiphi imivimbo nokushintsha kombala kukhombisa ukuthi umzimba unezinkinga ezithile.
Nge-pancreatitis, isikhumba singaphenduka siphuzi, siphenduke sibe luhlaza okwesibhakabhaka noma sithole i-grey-earthy hue, okufanele ixwayise isiguli ngokushesha.
Isici esihlukile senqubo yokuvuvukala ebabazekayo kanye nokuntengantenga kwamanyikwe noma isibindi iqiniso lokuthi ngokucindezelwa kuzo aliguquki.
Lokhu kuwuphawu olungahambisani, okusho ukuthi kungenzeka lungabikhona kuzo zonke iziguli. Kodwa-ke, uma ubona okuthile okunje, shesha ubonane nodokotela.
Ama-inclusions afanayo nawo angaba nemvelaphi ehlukile, ngokwesibonelo, i-microtrauma ngesikhathi sokususwa kwezinwele, i-angioma, isimila se-benign esikhula kusuka emithanjeni yegazi noma emithanjeni yegazi, ukusweleka kukavithamini C no-K, isifo se-rheumatic, njll. Ukukhula ngokweqile kwamagciwane kubhekwa ngokumelene nesizinda sokuvuvukala kwe-pancreatic.
Umsebenzi wokuvikela oncishisiwe uthinta ngokushesha amathuba okuqalwa kokungezwani komzimba wegciwane noma i-allergic etiology. Ngenxa yalokhu, i-eczema, i-atopic dermatitis, kuqhuma ukuqubuka. Lesi ngesinye sezizathu zokuthi kungani kudingeka ukuba uzwele kakhulu ekudleni kwe-pancreatitis.
Ngisho nemikhiqizo engakaze ibhekane nokubi okungaphenduki kahle ingabekezeleleka. Isithelo ngasinye esisha, imifino, okusanhlamvu kufakwa kumenyu kancane kancane, kuqala kumthamo omncane, ukuze kulandele umkhondo okwenzeka ngaso sonke isikhathi uma kungenjalo.
Ukubhekisisa ikakhulukazi kufanele kukhokhwe esikhumbeni esiswini, emijijeni nasezinkalweni. Isibonelo, endaweni yenkaba ngesikhathi sokwanda kwenqubo yokuvuvukala yamanyikwe, kungenzeka ukuthi ukulimala kungenzeka kufane nokulimala. Izindawo zesikhumba ku-groin nge-pancreatitis zivame ukuba nomthunzi oluhlaza okwesibhakabhaka kube luhlaza. Ukubonakaliswa okufanayo kokuvuvukala kungathinta okhalweni.
I-Urticaria ingenye uphawu olujwayelekile lomonakalo we-pancreatic. Amaqhubu ashibhile esikhunjeni anombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kaningi zivame ukwenziwa endaweni ngemuva, emilenzeni nasezinkalweni. Izimpawu ziyancibilika kungakapheli amasonto amabili, kushiya izinto zokwenza izinto ezihlangene kalula nezindawo zobudala.
Ukuvela kwezihlakala zesikhumba
Nge-pancreatitis ngesikhathi sokuqhuma, amabala ahlala avela enkabeni. Umsila we-pancreatic utholakala kule ndawo. Ukulandelwa kufana nokulimala. E-groin bathola i-tint eluhlaza okotshani.
Inqubo ye-pathological ingathinta okhalweni.
I-Urticaria ukuqubuka okuvela ku-pancreatitis eqatha noma engamahlalakhona. Ukulandela kwakhe kungavela:
Kuvela izihlakala esikhunjeni esikhunjeni, ngombala obomvana ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemuva kwamaviki ambalwa, amabala ayanyamalala, futhi kuvela iziqaqa endaweni yazo.
Ukubonakaliswa kwesikhumba ezifweni zamanyikwe kungahlotshaniswa nomzimba ongalwi. Ukungasebenzi komzimba kuthinta isimo sokuzivikela komzimba. Ukuxilongwa kwe-pancreatic pathologies kudinga ukudla okuqinile okuvela esigulini.
Yonke imikhiqizo ingaba yingozi futhi ingavusa ukuqhaqha, i-atopic dermatitis, eczema. Uma isiguli besingenakho ukungezwani kokudla ngaphambi kwesifo, khona-ke ngemuva kokuthola i-pancreatitis, noma yimuphi umkhiqizo ojwayelekile singakubangela ukungabekezeleli.
Lezi zimpawu eziyisixwayiso azikwazi ukunganakwa noma ukuzazisa.
Ngokwengeza emaphashini esikhumba, wonke umbala wesikhumba ungashintsha. Ngesimo esibuhlungu senqubo ye-pathological, isiguli sakha i-jaundice yemishini.
Imbangela yazo ukucindezelwa kwe-bile duct nge-pancreatic izicubu ezithambile.
I-pilireat pancreatitis ivame ukubonakaliswa ngokuqhuma esifundeni sesikhashana. Ngenxa yokuphazamiseka okuvela emathunjini amancane ngokubhekene nesizinda sezilonda zepancreatic, ukuqubuka kwesikhumba kutholakala ebunzini, kepha kungasakazeka kuso sonke isikhumba sobuso.
Uma ungathathi noma yiziphi izindlela zokwelapha lesi sifo, isibalo sezinduna kancane kancane sizoqala ukwanda. Ngenxa yokuvutshelwa nezinqubo ezibeka phansi, ezidalwa ukuqhekeka okunganele kokudla, ziqala ukubonakala kwezinye izingxenye zomzimba.
Uma kungekho zindawo, amabala noma ezinye izimpawu zesifo ku-epermermis, kepha ukulunywa kuvela njengophawu oluzimele, khona-ke singacabanga ngokuba khona kwesifo sikashukela mellitus.
Ukuqunjelwa kwesikhumba okungabonakala ngenxa yesifo esibucayi kakhulu njengoba umdlavuza we-pancreatic unganakwa.
Amanyikwe: izimpawu zesifo, izimpawu zesifo
Imvamisa, amanyikwe aletha izinkinga zempilo, izimpawu zesifo zingahluka. Kuya zombili ezifweni uqobo lwaso nasigaba sokukhula kwalo. Kodwa-ke, amacala amaningi anezimpawu ezifanayo.
Ungasibona kanjani isigulo nokuthi yini okufanele uyenze kuleli cala? Izimpawu zesifo se-pancreatic zingahlanganiswa ngamaqembu amaningana amelwe ama-syndromes ahlukahlukene.
Isiguli kufanele sifune usizo esikhungweni sezokwelapha, oluzogwema izinkinga ngama-pancreas ngokuzayo.
Ama-pancreas we-pancreas kwabesifazane nabesilisa angathuthukisa ngokumelene nesizinda sokuntuleka kwe-exocrine. Kulokhu, lesi sifo sizoba nzima kakhulu.
Lokhu kungenxa yokufa kweningi le-parenchyma ngesikhathi sokukhula kwezifo ze-exocrine. Inani le-parenchyma efile lifinyelela ku-90%.
Ngenxa yalokhu, isiguli sinciphisa izinga lokukhiqizwa kwama-enzyme adingekayo enhlanganweni yezinqubo ze-metabolic.
Izimpawu zokuqala zokwephulwa komkhakha owethulwe kuhlotshaniswa nokwehla okukhulu komsebenzi we-exretory wesitho. Lokhu kuvezwe kwizibonakaliso ezilandelayo:
I-Cachexia, okungukuthi, ukukhathala.
Ukuthuthukiswa kwesifo sohudo.
Ukwephulwa komsebenzi we-exocrine organ in emadodeni nakwabesifazane kwenzeka kuma-pathologies ahlukahlukene. Lokhu kusebenza esimweni esingamahlalakhona se-pancreatitis, lapho isiguli sehlisa khona isisindo, ukuthuthukiswa kwe-steatorrhea kuyabonakala. Ukuphazamiseka kwezinqubo ze-metabolic kungaholela kwisifo sikashukela i-mellitus.
I-Schwahman's syndrome ibonakala ngokubonakala kwezimpawu ngenxa ye-pancreatic hypoplasia, okuyi-pathology yefomu le-autoimmune. Ukukhiqizwa kwe-lipase ne-trypsin kuyancipha, kuphakama ukuphazamiseka kwamathambo, kuvela umongo wethambo.
Isifo i-Autoimmune yi-cystic fibrosis. Ezimweni eziningi (cishe ama-85% eziguli), ukuntuleka kokukhula kwengqondo kukhula. Ngenxa yalokho, isiguli sakha i-fibrosis kanye ne-cysts, i-organ atrophy iyabonakala.
Ukwephulwa komsebenzi we-exocrine we-gland kungenzeka ngemuva kokuqalwa kabusha kwesitho. Le ndlela ibuye iqale ukuthuthukiswa kwe-pancreatitis engamahlalakhona, phakathi lapho kukhona ukwanda kwengcindezi ye-intraductal. Le ndlela isetshenziselwa nomdlavuza we-pancreatic noma i-necrosis.
Ngesikhathi sokuqubuka kwezifo ezingathi sína, ngokwesibonelo, ngesifo se-ulcerative colitis noma isifo sikaCrohn, isiguli singakha indlela yesibili yokungapheleli kwepancreatic pancreatic. Kunoma yikuphi, uma lezi zibonakaliso noma ezinye ziqale ukuvela, ukungenelela kochwepheshe kuyadingeka.
I-Tropholoacaca insuffence syndrome kanye nokudakwa
I-Intoxication syndrome iboniswa izinguquko eziningi ezivela ezinhlelweni ezahlukene zomzimba. Isiguli sinokwehla kwesisindo, umkhuhlane ne-tachycardia. Ngaphezu kwalokho, umfutho wegazi wesiguli uyancipha. Kunesimo sobuthakathaka, futhi i-erythrocytosis kanye nokwanda kwe-ESR kuyatholakala ekuhlolweni kwegazi.
Kwezinye izimo, i-psychosis yokudakwa ingaqala. Ikhula ngenxa ye-hypoxia yobuchopho kanye nokuvela kokuvuvukala. I-psychosis yohlobo lwamanje nayo iyakhiwa ecaleni lomonakalo emithanjeni yegazi yengqondo yohlobo olujwayelekile. Ikakhulu kaningi, lokhu kugula kuvela kubantu abanezifo zesibindi nabasebenzisa kabi utshwala.
Ukubonakaliswa kwemitholampilo kokulimala kwe-pancreatic kubonakaliswa yi-euphoria, ukuthuthumela kwesandla, kanye nokuba khona kwengxabano. Uma izimpawu zingaqediwe futhi ukwelashwa kungekho, khona-ke i-psychosis iyaqhubeka.
Isiguli sinokukhuphuka kwezinga lokuthokozela, ukweqiwa kwamathoni nokukhishwa inyumbazane kungenzeka.
Ngemuva kwalokhu, ukwehla kokuxwaya kwenzeka, umsebenzi wezimoto nezengqondo uvinjelwe, isiguli siba sesimweni sokuqina.
Izimpawu zesifo se-pancreatic zinokunye ukubonakaliswa. Sikhuluma ngokuvela kwe-tropholoengqondo insufficiency syndrome. Lokhu kungumphumela wokuntuleka kwe-enzyme nokuphakama okulandelayo kokugaya ukudla.
Izimpawu zesifo se-pancreatic zinez okulandelayo:
Lapho kutholakala khona amanyikwe, isikhumba simnyama (uphawu lweBarthelheimer's).
Ukuxhumana kokunyakaza kuyaphazamiseka.
Esiswini, fat subcutaneous (uphawu lwe-Grotto) atrophies.
Ukucwiywa kwesikhumba kwenzeka.
Isikhumba sithathwa grey.
Kwezinye izimo, ukuphazamiseka kwengqondo kungahle kube khona.
Izifo ze-pancreas ziholela ekuthuthukiseni izinhlungu ngokushesha. Ubuhlungu buvame ukubonakaliswa okuyinhloko ngenkathi kusungulwa i-pancreatitis.
Uma ubunjalo benkambo yesifo bukhulu, khona-ke izinhlungu zingabonakala njengokuhlala isikhathi eside, ukuqina nokuqina. Uhlobo lwe-pancreatitis olungamahlalakhona lubizwa kancane.
Kwezinye iziguli, izimpawu zesifo se-pancreatic kungenzeka zingabikho.
Ngemuva kwesikhashana, izinhlungu zinganyamalala.Lesi isikhathi eside impela (iminyaka engama-5-15 ngemuva kokuqala kokuhlasela kokuqala). Lokhu akusho ukuthi lesi sifo sinyamalele.
Lokhu kukhombisa ukushona kweziphetho zezinzwa, okuqinisa isimo kuphela. Ngasikhathi sinye, isiguli singakhula i-mellitus yesifo sikashukela kanye ne-steatorrhea.
Ngemuva kwesikhathi esithile, kuvela ezinye izimpawu zesifo.
I-Korotov S.V: "Ngingancoma ikhambi elilodwa kuphela lokwelashwa okusheshayo kwezilonda kanye ne-gastritis, manje eseyanconywa nguMnyango Wezempilo.
Ukuthuthukiswa kobuhlungu kwenzeka ngaphansi kwethonya lezinto eziningi. Lokhu kusebenza ekulimazeni i-gland, ukuthuthukiswa kokuvuvukala kanye ne-ischemia. Ukusebenza kahle kwesikhashana kwemisebenzi yesitho kwenzeka, kepha ukulimala kwaso kungenzeka. Uma kwenzeka umsebenzi ungakhubazeki, ingcindezi yejusi le-pancreatic ezinduneni ikhuphuka, okubangela uphawu olungathandeki.
Kuma-pancreas, izimpawu esimweni sobuhlungu zivela ngokuqinile eminyakeni yokuqala yokukhula kwesifo. Ngemuva kweminyaka eyi-10, uphawu lubonwa engxenyeni yeziguli kuphela, kuthi emva kweminyaka eyi-15 - ezigulini ezingama-25%. Lokhu kufakazela lo mqondo ongenhla mayelana nokuncipha kobuhlungu nokufa kwezinzwa.
Ngaphezu kwe-pancreatitis ezifweni zepancreas, izimpawu ezisesimweni sobuhlungu zingabonakala ngokuvela kwe-pseudocyst. Kukhona ukwanda kosayizi nokwanda, okudala ukucindezelwa kweziqubu ze-duodenum ne-bile. Lokhu kuholela ekubukekeni kobuhlungu.
Izimpawu zesifo se-pancreatic ngesimo sobuhlungu zinesici esisodwa. Imvamisa, izimpawu ezingathandeki zenzeka esifundeni se-epigastric. Kodwa-ke, izinhlungu zingahambela kwezinye izindawo, kuya ngendawo lapho ukuvuvukala ku-gland. Ngakho-ke, izinhlungu zepancreatic zingenzeka esitholeni uqobo, emva kwalokho zisabalale ku-groin nasemuva, sternum nakwezinye izindawo.
Indlela ye-Thrombohemorrhagic yesifo ibonakaliswa ngokuvela kweziqeshana zegazi emithanjeni ye-pulmonary, coronary and cerebral. Isimo esifanayo senzeka ohlelweni lwe-portal lwesiguli. Ngesikhathi se-dyspeptic syndrome, isiguli sinokwehla kokudla, ukubopha, ukuthokomala kanye nokuqhuma esiswini. Ngaphezu kwalokho, isiguli sakha i-savil ngokweqile kanye nokuhlanza.
Ezinye izinkomba zezinqubo zokuvuvukala zingabangelwa ukwanda kosayizi be-gland nokucindezelwa kwezitho zomzimba eziseduze. Isiguli sihlakulela uhlobo lomshini we-jaundice, amabala ayanda, umchamo umnyama futhi amalangabi ayakhanya. Ukuqhephuka nokulunywa kwesikhumba kungenzeka.
Le syndrome iqala ukwakhiwa ngesikhathi sokukhula komdlavuza we-pancreatic, ngokwakhiwa kwamaphaphu okuthiwa i-pseudocysts kanye nokuvela kwezinkinga zohlobo lwe-pancreatitis oluhlala njalo. Ukuvela kwesifo kungenzeka futhi ngesikhathi sokukhiqizwa kwezindlela ezahlukahlukene zokukhubazeka ekuthuthukiseni indlala.
Uma ukucindezelwa kwe-duodenum kubonakala, isiguli sinokuvinjwa kwamathumbu. Lesi simo sikhonjiswa ngokuphelelwa ngamandla komzimba wesiguli, ukubonakala kokuhlanza kaningi futhi okunenzuzo, nokwakhiwa kokushoda kohlobo lwe-trophic. Uma imithambo ye-splenic ne-portal ithontshiwe, khona-ke kwakhiwa i-pancreatic ascites.
Uhlobo lwe-pancreatocardial of syndrome lubonakala ngokuncipha kwengcindezi yegazi. I-extrasystole iyabonakala, ukushaya kwenhliziyo kuyashesha, nemisindo yenhliziyo iyagwazwa. Ngesikhathi se-cholestatic syndrome, isiguli sihlakulela ukulunywa kanye ne-jaundice, kukhuphuka usayizi wesibindi.
Izifo zesitho zingabonakala ezinye izibonakaliso, ezibuye ziboniswe ngama-syndromes. Ngendlela engapheli yesifo se-pancreatitis, kunethuba le-neurasthenic syndrome.
Lesi simo sizibonakalisa ngesimo sokufutheka okufushane, ukuthuthukiswa kokuvinjezelwa kwemoto nobuthakathaka bemvelo ejwayelekile.
Imvamisa isiguli siba nobuhlungu bekhanda, inkumbulo isebenza ngokuqina, ukunakwa kuyancipha, ukukhathala kuyanda.
Izenzo zesiguli lapho kutholwa izimpawu
Izimpawu nokwelashwa kuyaxhuma. Ukungenelela okuqhubekayo ukuze kuqedwe i-pathology kuzoncika ekubonisweni nasezigabeni zesifo.
Kuyadingeka ukuthi unake ingozi yokuzilapha.
Kufanele ufune usizo lodokotela lokwakhiwa kwezimpawu ezahlukahlukene. Izindlela ezahlukahlukene zisetshenziselwa ukwenza isifo. Ukuhlolwa kwe-x-ray okusetshenzisiwe, ukuhlolwa kwe-Ultra gland, i-compact tomography nezinye izindlela.
Izenzo zesiguli kufanele zibe nezigaba eziningana ezidinga ukuvumelana nodokotela wakho. Kuyadingeka ukunamathela ekudleni, ngeke kube okuphezulu ukusebenzisa izindlela zokuthibela. Basiza ukugwema ukugula kubantu abanempilo. Iziguli futhi akufanele zingakunaki ukuvimba, ngoba izinyathelo ezinjalo zizothuthukisa isimo sabo nenhlala-kahle yabo.
Izinyathelo zokuvimbela zenzelwe ukuvimba inqubo yokuvuvukala nokwenza isimo sibe sibi kakhulu.
Imiphumela emibi empilweni yabantu kanye namanyikwe iyathintwa yimikhiqizo yotshwala nogwayi. Ukuvikelwa kwezifo kudinga ukwenqatshwa kwalezi ziluthwa.
Ukudla okungajwayelekile noma ukudla ukudla okunamafutha nakho kuthinta kabi isimo se-pancreas. Izimo ezinjalo kufanele zigwenywe.
Kunconywa ukusebenzisa amakhambi e-herbal kaningi. Bangaba ama-lingonberry, ama-dandelion, ama-blueberries, ama-rose okhalweni kanye nezimbabazane. Uma kunezinkinga ngama-pancreas, khona-ke udinga ukulahla ukusetshenziswa kwamafutha nokudla okuthosiwe. Imikhiqizo enika izinongo ayivunyelwe. Akufanele ube nokudla okulula lapho usohambeni.
Ukudla kumele kwehluka. Ukondleka okwenziwe ngokweqile kuyisihluthulelo senhlala-kahle. Ukudla kufanele kwenziwe izikhathi ezingama-5-6 ngosuku ngezingxenye ezincane. Phakathi kokudla, kunconywa ukugcina ngezikhathi ezifanayo.
Izolo isinkwa esinsundu izolo kufanele sifakwe kumenyu. Isinkwa esimhlophe sivunyelwe. Izifundo zokuqala kufanele zibe yisisekelo sokudla kweziguli.
I-Borsch, isobho zemifino nobisi, isobho leklabishi - lolu akuyona yonke uhlu lokudla okuvunyelwe. Ungayidla inyama, kepha hhayi amanoni. Kulokhu, inkukhu enciphile, inyama yomvundla nenyama yenkomo kufanelekile.
Inhlanzi ingakhonzwa ibilisiwe noma ibanjelwe.
Ungasebenzisa noma yimiphi imifino. Okuhlukile kuyasebenza kulezo zemifino eziphekwe ngokuthosa. Ukudla kufaka ukusetshenziswa kokusanhlamvu okuhlukahlukene, i-pasta, imikhiqizo yobisi.
Amafutha adinga ukuqedwa ngokuphelele. Ungasebenzisa imifino nebhotela ngenani elincane. Amaqanda avumelekile, kepha hhayi angaphezu kweyodwa ngosuku. Phakathi kweziphuzo, itiye elibuthakathaka, i-kissel ne-compote kuvunyelwe ukuthi kudliwe. Kwenqatshelwe ukudla izitsha ezibandayo kakhulu nezishisayo, izinongo nezinhlanzi ezinamafutha. I-chocolate ne-ayisikhilimu nayo kufanele ingafakwa eceleni.
I-apula yesifo sikashukela
IGlucofage ® (850 mg) Metformin
Ungayithola kanjani isifo sokuqina kwemithambo yegazi?
Ukudla kwesifo sikashukela sohlobo 2 nsuku zonke
I-systemic noma i-atherosclerosis ehlukahlukene
I-Berlition 300: imiyalo esetshenzisiwe
Ukwakheka kanye nefomu lokukhululwa Isixazululo somjovo 25 mg / ml 1 amp. ...
Ukusheshisa amazinga e-insulin
Ukwelashwa kohlobo 1 lwesifo sikashukela sohlobo 2 olunengxenye 2 ye-ASD: imithamo, ukuphikisana nemiphumela emibi
U-Espa Lipon (600 mg
IngcindeziIzinkinga zesifo sikashukelaI-Dummy DiabetesicsUkuxilongaImpilo enesifo sikashukelaIsifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekileUkudla ngesifo sikashukelaIzinhlobo NezinhloboImikhiqizo yabanesifo sikashukelaInsulin
Ungawasebenzisa kanjani ama-acorns
Ungayisebenzisa kanjani i-One Touch Ultra glucometer
Imaphi amavithamini ongawaphuza nge-pancreatitis kanye nawesibindi ngamanyikwe?
I-Humulin insulin yokwelapha isifo sikashukela kubantu abadala, ezinganeni nakukhulelwe
I-Aloe yesifo sikashukela